Ny Google I / O 2019 dia hatao amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 Mey | Androidsis
Ny Google I / O 2019 dia efa manana daty voamarina
Toy ny tamin'ny taona lasa, Google dia nikarakara lalao ankamantatra ho an'ny mpampiasa azon'izy ireo atao ny maminavina ireo daty hanatanterahana ny Google I / O 2019. Ary farany, ny daty hanatanterahana ny kaonferansa isan-taona ataon'ny orinasa Mountan View dia efa voamarina. Hetsika iray izay ahitantsika zava-baovao marobe avy amin'ny orinasa amerikana.
Tsy dia misy fiovana loatra amin'ny daty raha oharina amin'ny taona hafa. Ny orinasa amerikana dia mikarakara ity Google I / O 2019 ity amin'ny herinandro voalohan'ny Mey. Zavatra efa mahazatra antsika amin'io lafiny io.
Google I / O 2019 dia hanomboka amin'ny 7 Mey ary hitohy hatramin'ny 9 Mey. Tao anatin'izay telo andro izay, vaovao marobe no miandry antsika amin'ny orinasa. Na dia misy aza ny kaonferansa izay andrasan'ny rehetra. Satria manantena ny vaovao momba ny Android Q. ny rehetra, toy ny mahazatra, dia haseho ny kinova fandidiana teo aloha tamin'ny hetsika.
Tao anatin'ireo herinandro lasa dia lasa isika efa tonga ny famoahana momba ny vaovao izay dia hampidirina ao amin'ny Android Q, toy ny maody maizina zanatany andrasana. Zavatra andrasan'ny mpampiasa maro, indrindra ny fandinihana ny làlan'ity maody maizina ity niaina tamin'ny android hatramin'ny niandohanao.
Tsy io ihany no azontsika fantarina amin'ity Google I / O 2019 ity. Azo inoana, misy vaovao momba ny Assistant, ankoatry ny rindranasa hafa toa ny Google Photos. Angamba rehefa mandeha ny herinandro dia haseho ny antsipiriany momba ny vaovao haseho amin'ity hetsika ity.
Noho izany, manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 Mey dia manana fotoana ihaonana isika miaraka amin'ity Google I / O 2019 ity. Hahafantatra vaovao misimisy kokoa izahay izay hanatratra anay momba ny vaovao hatolotry ny orinasa amin'ity hetsika ity. Satria azo antoka fa hiteraka fahalianana be izy ireo. Inona no antenainao ho hita amin'ity hetsika ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Google I / O 2019 dia efa manana daty voamarina
Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny telefaona Android
Nanamafy ny famolavolana ny LG G8 ThinQ, miaraka amin'ny fahagagana eo amin'ny efijery?